FARITRA ANOSY : Mandroso ny fametrahana fotodrafitrasa sy ny tetikasan’ny Filoham-pirenena
Enim-bolana aty aorian’ny nanendrena azy ny Governoran’ny Faritra Anosy, Raharimbola Jocelyn dia mahatsiaro ho nahavita zavatra. 3 mai 2022
Ny 30 septambra izy no nandray ny asany ary nandritra ny telo volana farany tamin’iny taona iny dia nanohy ny famitana ny fotodrafitrasa efa natomboky ny mpitantana nodimbiasany ka ny misongadina amin’ireny dia ny fanohizana ny fanamboarana lalana rarivato tao an-tampon-tanànan’i Taolagnaro izay nahatratra 5km.
Tahaka izany koa ny any Amboasary sy Betroka izay efa tonga eo amin’ny dingana fahatelo. Misy ihany koa ny fanamboarana tsena manara-penitra tahaka ny any Manatenina, ohatra, izay nasiana jiro mandeha amin’ny herin’ny masoandro. Any Nabinda kosa ho an’ny kaominina Betroka. Nampiana efitranon-tsekoly kosa ny EPP ao amin’ny kaominina ambanivohitr’i Farantsa Taolagnaro sy Analapatsy. Ankoatra ireo dia nisy ihany koa ny fandrindrana ireo asa rehetra niarahana tamin’ny mpiara-miombon’antoka sy ny asa sosialy sy toekarena iarahana amin’ny PIC izay vatsian’ny Banky Iraisam-pirenena vola. Nisy, ohatra, ny fanohizana ny tsena manara-penitra tao amin’ny kaominina Ranomafana Atsimo. Nisy ihany koa ny fanamboarana biraon’ny kaominina tamina kaominina ambanivohitra maromaro. Misy ihany koa ny fampiroboroboana ny lalam-pihariana be rose sy ny lavanila ary ny letisia, eny hatramin’ny fiompiana tantely aza. Nisy ihany koa ny fotodrafitrasa momba ny fizahantany izay ao amin’ny tendrombohitra Saint- Louis ao akaikin’ny tampon-tanànan’i Taolagnaro ihany. Nisy ihany koa ny fanaovana tohodrano sy lakandrano anondrahana tanimbary any Ankaramena sy ny fanodinana mangahazo ho an’ny Faritra Anosy. Avadika ho lafarinina ny mangahazo izay iaraha-miasa amin’ny DEFI. Tsy miafina amintsika ihany koa ny tetikasa Mionjo izay iaraha-miasa amin’ny Banky iraisam-pirenena ary ny tetikasa Afafi Sud izay iarahana amin’ny vondrona Eoropeana. Noezahina, hoy ny Governora, ny nandamina ireo asa samihafa ireo. Ny lafiny sosialy dia mbola mitohy ny fanohanana ny tokantrano marefo amin’iny tapany Atsimo iny, izay isaorany manokana ny Filoham-pirenena. Nisy, ohatra, ny Caravane du Sud ; mitohy ny fizarana fanampiana ara-tsakafo amina kaominina maromaro any an-toerana izany.
Mitohy ny tetikasan’ny Filoham-pirenena
Anisan’ny Faritra manan-karena ambanin’ny tany Anosy. Porofon’izany ny fitrandrahana fasimaintsy any an-toerana izay mandray anjara betsaka amin’ny asa fampandrosoana. Raha mitontaly miliara ariary, ohatra, ny tetibolan’ny Faritra dia avy amin’io fitrandrahana io ny ampahany betsaka enti-manana izany. Fa anisan’ny tetikasa goavana any Atsimo ihany koa ny tetikasa Mionjo izay vatsian’ny Banky Iraisam-pirenena vola. Sampona mankany Maroalimaitso moa no vatsiana rano amin’ny alalan’ny “pipeline” ankehitriny ka mahatratra 200 tapitrisa dôlara ny tetibola amin’izany ary Faritra telo no indray tafiditra ao anatiny.
Fa nandritra ny fandalovan’ny valanaretina covid-19 tao anatin’izao enim-bolana nitondrany izao ihany, ny Governoran’ny Faritra Anosy dia nanipika fa nisy ny fiaraha-miasa tamin’ny sampan-draharaham-paritry ny fahasalamana (DRSP) tany an-toerana ary io no nahafahana nifehy izany valanaretina izany. Andalam-pivoarana araka izany ny Faritr’Anosy ary tsy misy intsony ny sakana tsy hahafahana manao izany, ny firaisankinan’ny mponina na ny any an-toerana na ireo avarapianarana any am-pielezana sisa andrasana ho fanoitran’izany.